फक्रिन नसकेको हाम्रो भ्यालेनटाईन… | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध फक्रिन नसकेको हाम्रो भ्यालेनटाईन…
२०७६, २ फाल्गुन शुक्रबार १०:०४
एउटा कुरो भनौ दिपे ! ठुस्किएर उतातिर फर्किएकी उनले म तिर नहेरी बोलीन ।मन लागे हजारै भन न किन एउटा नि म उतैतिर सरेर उनका केसहरु खेलाउन थाले । थामडाँडाको हरियो चौर , धौलागिरी हिमाल को मनमोहक दृस्य अनी उनको समिप अरु मलाई के चाहियो र संसारकै भाग्यमानी प्रेमी थिए म ।
तिमी केटाहरु कहिले पनि सिरियस हुँदैनौ ! उठेर केस मिलाउदै जाउँ अब त साँझ परिसक्यो भन्नथालिन । मलाई भने छुट्टीन मनै थिएन । समय पनि कती छोटो कुन्नी ? तल बेनिबजार तिर झिलमिल बिजुली बत्ती बलिसकेका थिए ! ओहो आकसमा पनि तारा झुल्किसकेछन । हामी कन्थराजथानको धारामा पानी पिएर आ आफ्नो घर तिर लाग्यौ । घरमा पुग्दा आमाले खाना पस्केर मलाई कुरिरहनु भएको रहेछ । खाएर कोठातिर छिरे , बत्तिको उज्यालोमा टेबल माथिको हरियो रहदानी टल्किरहेको थियो । अस्ती मात्रै सरकारलाई ५ हजार दाम तिरेर बनाएको थिए पल्लोथरका झिल्के दाइले बिदेश पठाइदिन्छु भनेर । अघी सोमाले भनेका कुराहरु ले मनमा पिरो पस्यो । दुई चार बर्षा बिदेश गएर पैसा कमाएर उनीलाई नै बिहे गर्ने योजना थियो मेरो । घरको स्थिती सम्झे दमको बिमारि ले ओछ्यानमा पल्टिएका बुढा बाउलाई सम्झिए , आफुले नखाएर हामीलाई पेटभरी खुवाउने आमाको मलिनो अनुहार अनी ति कलीला भाईबहिनीहरुलाई सम्झे । देशमा माओवादीहरुको जनयुद्द चर्केको छ न जागिर पाईन्छ न पढाई नै सकिएको छ । मेरो अनुहार मा चिट चिट पसिना आयो ! उफ ! ब्यर्थै उनीलाई माया गरेछु जस्तो लाग्यो । लामो सुस्केरा लिए ! अम्खोरा तानेर पानी पिए प्यास मेटिए पनि सन्ताप को तिर्खा बढेर आयो । बत्तीतिर नजर डुलाए पुतलीहरु झुम्मिरहेका थिए । बल्नु पर्छ र मात्रै सबैले देख्छन म नि पुतलीहरु झै मुन्छेहरु लाई झुम्माउन बल्न सिक्नु पर्छ । एक संकल्प गरेर निदाए जसो तसो ।
मेरो भिसा लागेछ मलेसिया तिर काम गर्न जाने । उनिलाई खबर गर्न मैले थामडाँडामै बोलाए । सुनसान रात थियो आकाशमा ताराहरु टिल्पिलाईरहेका थिए । उनी सुँक्क सुँक्क गरेर रुदै थीईन । अरे लाटी दुई बर्षा त हो नि ! पैसा कमाएर फर्केपछी तिम्रो आमाबाउ सँग हात मागेर डोली मा सजाउदै लैजान्छु तिमीलाई, मैले फकाउने कोशीस गरे ।
परदेश भनेको परदेश नै रहेछ जतिबेला पनि काम । घरमा सिन्को नभांँच्ने मलाई मलेसियाको जंगलमा काठहरु मेसिन मा चिर्दा आफ्नै मुटु चिरे जस्तो हुन्थ्यो आर्को तिर सोमाको याद ले पल पल छट्पटिन्थे । त्यो बेला मा अहिले जस्तो मोबाइल थिएन न गाउमा ल्याण्डफोन नै । चिट्ठी पठाएको ३ महिनामा मुस्किल ले उनको जबाफ पाए । उनिले लेखेकी थीईन जती टाढा भयो माया झन गाढा हुदोरहेछ दिपे ! उनका ति सब्द हरु पढ्दा अनायासै मन भरिएर आउथ्यो अनी एकान्तमा गएर धित मरुन्जेल रुन्थे । दुःख पछी सुख आउछ बिछोड पछी मिलन जाबो २ साल त बितिहाल्छ नि म घरको आवश्यकता र उनीसंगको मिलन को आसामा निकै मेहनत गरेर काम गर्थे । ३ – ४ वटा पत्र आदानप्रदान मै समय ले बर्षा दिन काटेछ म बिदेश छिरेको पनि । मेरो हरसमय उनका तिनै मायाबी शब्दहरुले कोरिएका पत्रहरु पढेर बित्ने गथ्र्यो । मैले २ वटा पत्र पठाउदा पनि उन्को एउटा जबाफ आएन । मनभरी कुरा खेल्थे , के गर्ने के नगर्ने कुनै मेसो नै थिएन , फोन गरौ न कुनै नम्बर छ पत्र लेख्यो जबाफ आउँदैन । घर बाट चिट्ठी आउँदा पनि उनको बारेमा केही लेख्दैनथे कसैले पनि, मेरो मन बेचैन थियो । मेरो मनमा संका बढेर आयो कतै उनको बिहे त भएन ? जसो तसो २० महिना काम गरेर बिताए तर त्यहा भन्दा बढी मलाई मलेसिया मा बस्नै मन लागेन । म फर्किए मेरो देश मेरी सोमा लाई भेट्ने अदभुत चाहनाहरु बोकेर ।
जसरी हजार सपनाहरु बोकेर मलेसिया पसेको थिए त्यसरी नै हजारौ सपनै बोकेर फर्केको थिए म आफ्नो देश फरक त्यती थियो जादा निरास मन अमिलो चेहेरा तर फर्किदा भने अनुहार भरी उमंगका तरंगहरु । सोमालाई भेटेर बिस महिना देखी मनमा संगालेका पिडाहरु सुनाउन चाहन्थे म त्यसैले एरपोर्ट झरेकै दिन गाडी चढेर गाउ तिर लागे । म गाउ पुग्दा पाखा भरी पहेंलै प्याउली फुलहरु फुलेका थिए , थामडाँडामा सल्लाका बोटहरु अग्ला अग्ला भएका रहेछन । मेरा नजरहरु उनिलाई देख्नको लागि आतुर थिए तर उनको अत्तोपत्तो पाईन । भोलिपल्ट गाउ घुम्दा थाहा भयो उनको त बिहे भईसकेछ पल्लो गाउतिर । बुढो भारतीय सेनामा भाएकोले बिहे गरेर उतै लगेछ । म भने भित्र भित्रै जले । यस्तो लाग्थ्यो कि मैले सुनेका यि खबरहरु झुट्टा हुन । उनी कही कतै मलाई नै कुरेर बसेकी छिन तर कल्पना र यथार्थमा धेरै अन्तर भइसकेको थियो । आफ्नो जिन्दगी आँफैलाई बिरक्ती लागेर आउथ्यो मलाई । बिरह लाग्दा त्यही थामडाँडामा पुग्थे जहाँ उनी र म माया साटेर घण्टौ कुरा गर्ने गर्दथ्यौ । थामडाँडा त्यही थियो, हामीले ढुङ्गामा कोपेका हाम्रा नामहरु पनि उस्तै थिए, पारीपट्टी देखिने त्यो धौलागिरी हिमालको मुस्कान पनि त्यस्तै थियो तर म र उनी फरक भईसकेका थियौ । थाहै नपाई हामी हिंड्ने बाटाहरु अलग भाईसकेका थिए, सँगै बाँच्ने सपनाहरु अधुरै थिए । सात जुनी सम्मा साथ दिन्छु भन्ने उनको माया झुट्टो भईसकेको थियो सबै भन्दा पनि हिजो मेरी हुन्छु भन्ने उनी आज अर्कैकी भईसकेकी थिईन । आँफैले आँफैलाई चित्त बुझाउदै जिन्दगी जिउने रहर बोकेर फेरी खाडी तिर छिरेको पनि धेरै बर्षा भैसकेछ ।
कालन्तरमा पुगेर हामीले सँगै बिताएका ति पलहरुको याद आयो भने वा कही कतै पछाडि फर्केर हेर्न पुग्यौ भने मलाई माथिको प्रश्न को जबाफ दिनु है । अहिले लाई भने प्रेम दिबश को हार्दिक शुभकामना । गल्ती भए माफ गरिदेउ यो प्रेमिल मन लाई फेरि …….। प्रदिप सुवेदी/ज्यामरुककोट म्याग्दी हाल: दुबई
Previous articleगण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला महोत्सव पर्वतको जलजलामा शुरू
Next articleप्रणय दिवसका अवसरमा मायालु डाँडामा भिड